ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိယောက်ျားဆယ်ကျော်သက်များအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု၊ လိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ၊ ဘဝပုံစံနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားသောကျန်းမာရေး
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ, လူနေမှုပုံစံနှင့်ဆွီဒင်အမျိုးသားပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း (2013) တွေထဲမှာကိုယ်ပိုင် rated ကနျြးမာရေး
J ကို Dev မှနျစှာနထေိုကလေး။ 2013 ဇူလိုင် 29 ။
Mattebo M က, Tydén T က, Häggström-Nordin E ကို, Nilsson KW, Larsson M က.
အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန၊ Uppsala တက္ကသိုလ်၊ Uppsala၊ ဆွီဒင်၊ †လက်တွေ့သုတေသနဌာန၊ Uppsala တက္ကသိုလ်Västmanlandကောင်တီဆေးရုံVästerås, ဆွီဒင်; Public ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်စောင့်ရှောက်မှုသိပ္ပံ၊ Uppsala တက္ကသိုလ်၊ Uppsala၊ ဆွီဒင်၊ §ကျန်းမာရေး၊ စောင့်ရှောက်မှုနှင့်လူမှုဖူလုံရေးကျောင်း၊ Mälardalenတက္ကသိုလ်၊ Västerås, ဆွီဒင်။
အထက်တန်းကျောင်းယောက်ျားလေးများကြားတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပုံစံများကိုဖော်ပြရန်နှင့်လိင်အတွေ့အကြုံများကို, လူနေမှုနှင့် Self-rated ကျန်းမာရေးကိုလေးစားမှုနှင့်အတူညစ်ညမ်းခြင်း, မကြာခဏပျှမ်းမျှနှင့် nonfrequent အသုံးပြုသူများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။
16 ထံမှ 477 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးများ (ဎ = 53) အကြားတစ်ဦးကလူဦးရေ-based စာသင်ခန်းစစ်တမ်း, ကျပန်းနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဆွီဒင်2မြို့ရွာတို့၌အထက်တန်းအတန်းမရွေး။
အားလုံးနီးပါးယောက်ျားလေးများ 96% (ဎ = 453), ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်း (နေ့စဉ်) (10% ဎ = 47) ၏မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်ပျမ်းမျှအားအသုံးပြုသူများသည် (63% ဎ = 292) နှင့် nonfrequent အသုံးပြုသူများထံမှကွဲပြား (27% ဎ = 126) ။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်အသုံးပြုသူများနှင့် nonfrequent အသုံးပြုသူများကိုနှိုင်းယှဉ်မကြာခဏအသုံးပြုသူများအ 45 ကြိမ် (32, 25, 10%) ထက်ပိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူထိုကဲ့သို့သောတစ်ညရပ်တည်ချက် (အသီးသီး 13, 10, 2%) နှင့်လိင်အဖြစ်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ, ရှိခဲ့ပါတယ်။ မကြာခဏအသုံးပြုသူတစ်ဦးကမြင့်မားတဲ့အချိုးအစား (အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ကျောင်းပြေးတစ်ပါတ်ကွန်ပျူတာမှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ် (10, 32, 5%) 8 ဖြောင့်နာရီထက်ပိုမိုသုံးစွဲခြင်းနှင့်ရွယ်တူ (38, 22, 21%) နှင့်အတူပိုပြီးကြားဆက်ဆံရေးပြဿနာတွေသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် 11, 6, 5%), အဝလွန်ခြင်း (13, 3, 3%), ပါးစပ်ဆေးရွက်ကြီး (36, 29, 20%), နဲ့ပျှမ်းမျှနှင့် nonfrequent အသုံးပြုသူများကိုနှိုင်းယှဉ်အရက်သေစာအသုံးပြုမှု (77, 70, 52%) ၏အသုံးပြုခြင်း။ မကြာခဏအသုံးပြုသူတစ်ဦးကတတိယသူတို့အမှန်တကယ်လိုချင်ထက်ပိုမိုညစ်ညမ်း watched ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-rated ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်. အုပ်စုများအကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုရှိခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်အဖြစ်သတ်မှတ်ကောင်လေးတွေ, ပိုပြီးလိင်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြ, ကွန်ပျူတာမှာအချိန်ပိုမိုသုံးစွဲခြင်း, ပျမ်းမျှအားနှင့် nonfrequent အသုံးပြုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးမကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Self-rated ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်အဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုအဝလွန်ခြင်းမကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်အကြားနှစ်ကြိမ်အဖြစ်ဘုံခဲ့သော်လည်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
[PubMed - ထုတ်ဝေသူမှထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်]